ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အုပ်ထိန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ ပြောမပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများ
Home Parenting Child Teaching ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အုပ်ထိန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ ပြောမပြခဲ့သော အကြောင်းအရာများ
ဆယ်ကျော်သက်ယောင်္ကျားလေးတစ်ဦးကို ထိန်းသိမ်းရတာ လွယ်မလိုခန့ ခက်ပြီး တိမ်မလိုနဲ့ နက်နဲတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီကနေ့မှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ပျိုးထောင်နည်းအကြောင်းတွေကို မျှဝေပေးပါမယ်။
၁။ နားထေင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
သင့်မှာ အသက် ၁၃/၁၄ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေလောက် ဘယ်အရာကမှ အအရေးမကြီးတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ သင့်ရဲ့ အလုပ်က ပါးစပ်ပိတ်ပြီး နားထောင်ဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် သူတို့ကို ဘယ်လိုဆုံးမမလဲ? အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့လို့ ဒီအရွယ်အကြောင်း အရာအားလုံးသိသလိုမျိုးထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ခေတ်ကာလတွေပြောင်းလဲသွားပြီး အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတာကိုတော့ သူတို့သတိမထားမိကြပါဘူး။ သင့်ဘက်က နားထောင်ပေးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း မေးလာပါလိမ့်မယ်။
၂။ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ အကြောင်းကို သင်ပေးပါ
ကလေးတွေကို သူတို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလယ်ဗဟိုချက်မဟုတ်ကြောင်း သင်ကြားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ စကြဝဠာရဲ့ ဗဟိုလို့ မှတ်ယူလာတဲ့အခါ ပျိုးထောင်ရတာ ခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေက ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် တစ်ခြားအရာတွေကို ပိုလိုချင်လာတဲ့အခါ အဲဒါက ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို စိတ်ကျေနပ်မှုရချင်နေသော ဆန္ဒနှင့် ချက်ချင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိလိုသော စိတ်၊ တစ်ချိန်လုံးပျော်ရွှင်နေလိုခြင်းက ကလေးတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
၃။ သင့်ထက် မတူကွဲပြားသော အသွင်အပြင်နှင့် ဘဝရှင်သန်မှုများ
အရောင်အသွေးတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေး၊ ဘာသာရေးတို့နဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်စေဖို့ သင့်ကလေးတွေကို သင်ပေးပါ။ တစ်ခြားလူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို မေးခွန်းထုတ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ ကလေးကို ရပ်ရွာ/နိုင်ငံပြင်ပသို့ ခရီးသွားပြီး သင်ယူဖို့ ပြောပါ။
၄။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်အောင် သင်ပေးပါ
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လိုက်ခံစားရဖို့ မလိုအပ်ပါ။ အဲဒါကို အသိအမှတ်ပြုပြီး သင်အဲဒီမှာရှိနေကြောင်း သူတို့ကို အသိပေးလိုက်ပါ။ တီဗီအတူကြည့်ရင်း ဇာတ်လမ်းထဲက လူတွေဘယ်လိုခံစားနေရလဲ သူတို့ကို မေးကြည့်ပါ။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပါ။ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ တွေးခေါ်မှုနှင့် ခံစားချက်ကို ၎င်းတို့အားမေးမြန်းပါ။ သူတို့ရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုမှု ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်တွေကို မျှဝေစေပါ။
၅။ ကိုယ့်ကိုယ် မကြိုက်တဲ့လူကို အတင်းအကျပ်သဘောကျခိုင်းလို့မရဘူး
လူတိုင်းက သူတို့ကို ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကလေးတွေသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ဘာပဲလုပ်လုပ် သူတို့ကို မကြိုက်တဲ့လူရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီကိစ္စကိုလည်း သူတို့ကိုင်တွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ကလွဲပြီး တစ်ခြားအရာလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့မိသားစုက သူတို့နဲ့ ရှိနေသရွေ့ သူတို့ကိုချစ်တဲ့လူတွေ အမြဲရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒီအရာက လုံလောက်နိုင်ပြီဆိုတာကို ကလေးတွေကို ရှင်းပြပါ။ တစ်ခြားလူတွေကို ကြင်နာပြီး ဖေးမပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို သဘောကျဖို့ အတင်းအကျပ်ဖိအားမပေးသင့်ကြောင့် ဆုံးမပါ။ ကလေးတွေဟာ ဘဝရဲ့ အမှန်တရားကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လက်ခံလေလေ တစ်စုံတစ်ဦးမှ မကြိုက်သောအခါ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့ အလားအလာနည်းပါးလေလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ငြင်းပယ်ခြင်းက ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ချက်ချင်းလိုက်နာဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့
မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝမမေ့သင့်သော ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုလို လိုက်နာပြီး ပြောစကားနားထောင်တဲ့ကလေးဆိုတာကလည်း အင်မတန်ရှားပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးရတာမျိုး၊ နားလည်မှုယူရတာမျိုးက ရှိတတ်ပါတယ်။ သင်လုပ်စေတဲ့အရာတွေကို မလုပ်နိုင်သေးခင်မှာ သူတို့ဘက်က အလုပ်ကိစ္စတွေအတွက်လည်း လေးစားမှုပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်နည်းလမ်းကလည်း အမြဲတမ်းကောင်းမနေနိုင်ပါဘူး။
၇။ No ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်အောင် သင်ပေးပါ
No ဆိုတာ *တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို no လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ သူတို့က သင့်ဆီက သင်ပေးကမ်းသမျှ ဘယ်အရာကိုမှ မလိုချင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ၊ ဒီတော့ မတုံ့ပြန်ခင် စဉ်းစားပါ။ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို သင်ပေးပါ။ ဘယ်တော့မှ ဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်မိစေဖို့ ဆုံးမပါ။
Previous articleသားသားမီးမီးတွေကို ဘယ်လို Potty Train ပေးမလဲ?
Next articleကလေးတွေ အစာစားတဲ့အခါ ညစ်ပတ်ပေပွခွင့် ပေးသင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
ကလေးတွေကို အသက် (၁၀)နှစ်မတိုင်ခင်မှာ သင်ပေးထားရမယ့် ဘဝကျွမ်းကျင်မှု (၆)ခု
အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေက ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဘယ်လိုကူညီပေးလဲ?